Xiaomi Mi Mix 2S: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Xiaomi Mi Mix 2S abụrụla eziokwu: Mara nkọwa ya niile
N'ikpeazụ, ụbọchị ahụ abịa. E gosipụtarala Xiaomi nke mbụ dị elu. Anyị na-ekwu maka ya Xiaomi Mi Mix 2S. Ekwentị nke anyị na-amụta ụfọdụ nkọwa n'ime izu. Ma n'ikpeazụ, ọ na-ama e eze n'ihu na China. Ya mere, anyị amatala nkọwa niile gbasara njedebe mbụ nke akara ndị China nke 2018 a.
Anyị na-eche ihu ekwentị nke na-agbaso akara akara nke onye bu ya ụzọ n'afọ gara aga. Ma na mgbanwe ụfọdụ. Ọ pụtara maka ịbụ ekwentị dị ike ma dịkwa mma. Na mgbakwunye, na okpokolo agba kwụpụta ọzọ maka ịnwe ihuenyo na-enweghị okpokolo agba. Kedu ihe anyị ga-atụ anya na Xiaomi Mi Mix 2S a? Anyị ga-agwa gị ihe niile n'okpuru.
Na nke a ngosi omume anyị na-ama-enwe ike ịmata nkọwa zuru ezu nke ngwaọrụ dị elu. Ya mere, ekwentị a anaghịzikwa ejide anyị anya. Anyị nwekwara ike ịhụ na o nweghị ihe anyị mere wutere anyị. Xiaomi na-ewetakwa ekwentị ọzọ. Na mgbakwunye, n'ezie, ọtụtụ ndị ọrụ dị jụụ mgbe ha hụrụ nke ahụ ihuenyo ekwentị adịghị ama ọkwa. Igwefoto n'ihu na-alaghachi na ala nke ngwaọrụ ahụ.
1 Nkọwapụta Xiaomi Mi Mix 2S
Nkọwapụta Xiaomi Mi Mix 2S
Ekele maka mmemme ngosi a anyị amatala ihe niile gbasara ngwaọrụ. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Xiaomi Mi Mix 2S:
Nkà na ụzụ nkọwa Xiaomi Mi Mix 2S
Nlereanya My Mix 2S
Usoro njikwa Gam akporo 8.0 Oreo ya na MIUI 9.5
Ihuenyo IPS 5.99 sentimita asatọ na Full HD + mkpebi na 18: 9 ruru
Nhazi Qualcomm Snapdragon 845 nwere isi asatọ yana ọsọ ọsọ kacha nke 2.8 GHz
Nchekwa n'ime 64 GB / 128 GB / 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MP Sony IMX363 nwere oghere f / 1.8 na 12 MP Samsung S5K3M3 na oghere f / 2.4.
Igwe n'ihu 5 MP nwere oghere f / 2.0 na AI Face ID
Njikọ NFC GSM LTE-FDD LTE-TDD WDCMA TD-SCMA Bluetooth 5.0 USB Type C
Atụmatụ ndị ọzọ N'azụ mkpisi aka agụ AI ihu ID ihu ude Ntughari ngwa ngwa site na igwefoto Virtual Assistant
Batrị 3.400 mAh na ntinye ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Akụkụ 150.86 x 74.9 x 8.1mm
Ahịa Site na euro 429
Anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Xiaomi ejirila ngwaọrụ a tinye ike. Ọnụnọ nke Snapdragon 845 processor, nke kachasị mma n'ahịa taa, bụrịrị nkwa nke a. Ọzọkwa, ihe anyị ma ama tupu mmalite nke ngwaọrụ ahụ bụ na ọgụgụ isi ga-arụ ọrụ dị mkpa na igwefoto ekwentị. Yabụ na anyị na -atụ anya ọtụtụ ihe na igwefoto ndị a, dịka Xiaomi Mi MIX 2S nwere zọọkwa na igwefoto abụọ Na azụ. Ogologo obosara na oghere telephoto.
Ekele maka ọgụgụ isi ekwentị ekwentị ga-enwe ike chọpụta ihe nkiri maka iji nweta ihe kachasị mma n'oge niile. Na mgbakwunye, anyị ga-enwe ọmarịcha eserese ngosi na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụghị naanị na ọ ga - achọpụta ihe nkiri, mana ọ ga - enwekwa ikike ịchọpụta ihe mgbe anyị na-ese foto. Ọ ga-achọpụta ihe ị na-ese foto iji mara ihe ọ ga-elekwasị anya ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ndabere ahụ dị ntakịrị, na mmetụta bokeh a maara nke ọma.
Na mgbakwunye, maka vidiyo ahụ, anyị ga-achọta ụzọ onye na-adịghị Motion mma, nke ga - enyere anyị aka ịdekọ na fps 120 na Full HD na 240 fps na mkpebi 720p. Ma ị pụrụ ịhụ na Akara ndị China na-agbatịpụ obi na igwefoto ngwaọrụ. Ihe dị ka ihe ezi uche dị na ya, ebe ọ bụ nnukwu mmụba karịa ụdị afọ gara aga. Na mgbakwunye, enwere ike idekọ vidiyo etinyere na HEVC –Figh Efficiency Video Codec format.
Na mgbakwunye, a usoro nyocha ihu na igwefoto n'ihu nke Xiaomi Mi Mix 2S. Ọ na-abịa n'okpuru aha AI Face ID. Ya mere ọrụ ga-enwe nhọrọ na-eji nke a mode nke akpọchi ekwentị. Ọbụlagodi na na-eburu n'uche ọnọdụ nke igwefoto dị n'ihu na ekwentị, ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ.
N'ihe banyere nha, ihe nlere dị ka ekwentị nke afọ gara aga. O kariri milimita kariri onwa nke gara aga na uzo obula. Na mgbakwunye, o nwere ibu dịtụ elu, ụdị a dị gram isii karịa. Ya mere ọdịiche dị ntakịrị na nke a.
Ihe omuma ndi ozo ekpughere na ihe omume bu na nke a Xiaomi Mi Mix 2S ga-enwe nkwado maka eziokwu nke Google. Ekwentị ga-akwado ARCore. N'ihi ya, ọ na-aghọ n'ụzọ dị otú a otu n'ime ekwentị ole na ole na ahịa nwere nhọrọ a.
Ihe ọzọ dị ịrịba ama bụ nhazi nke ngwaọrụ ahụ nke nwere aluminom na ahụ seramiiki. Site na ihe anyị nwere ike ịhụ mbọ nke akara ndị China na nke a. Kpọmkwem anyị na-ahụ a aluminom chassis na seramiiki ahu na ngwaọrụ a.
Ozugbo anyị matara ihe niile gbasara ekwentị, anyị nwere akụkụ dị mkpa mara. Na ọnụahịa nke Xiaomi Mi Mix 2S ga-abịa na ahịa na ụbọchị ọ ga-akụ ụlọ ahịa. Naanị ụnyaahụ ka a mara ọkwa na onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ gaghị abụ ekwentị dị ọnụ ala. Ekwuru m eziokwu?
Ekwentị ga-abata n'ụdị dị iche iche n'ahịa. Otu n’ime ha nwere 6 GB Ram na nchekwa 64 GB, onye ọzọ nwere 6 GB na 128 GB nke nchekwa na onye ikpeazụ nwere 8 GB na 256 GB nchekwa. Onye ọ bụla ga-enwe ego dị iche iche.
El Xiaomi Mi Mix 2S ya na 6GB + 64GB ga-akwụ ụgwọ na 3299 yuan (ihe dị ka 420 euro)
Xiaomi Mi Mix 2S na 6 GB + 128 GB ga-efu kama Yuan 3599 (gburugburu euro 459)
Xiaomi Mi Mix 2s na 8 GB nke Ram na 256 GB nke nchekwa ga-ọnụ na Yuan 3999 (ihe dị ka euro 509) ga-etinyekwa chaja ikuku na-akwụghị ụgwọ
Ekwentị ga-aga ere ere site na Eprel 3. N'oge a anyị maara na ọ ga-adị na oji na ọcha, ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe agba ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi Mix 2S abụrụla eziokwu: Mara nkọwa ya niile
Ọnye na -bụ Roberto Cacho Martinez? dijo
Androidsis enyi… Ndi Full HD ma ọ bụ Amoled ihuenyo ???
Zaghachi Roberto Cacho Martinez
Huawei bụ ahịa kachasị ere na Spain ruo afọ a